Ogaden News Agency (ONA) – Suxufiyinti Ree Sweden oo Sanad Xabsigodu marayo Warqadna soo qoray
Suxufiyinti Ree Sweden oo Sanad Xabsigodu marayo Warqadna soo qoray
Wariyaashi Ree Sweden ee sida sharcidarada ah kaligi taliye Zewi ugu xukumay xabsiga 11 sanoo ah madama ay Ogadeniya rabeen inay kawaramaan, ayaa waxa ay soo direen warqad ay kaga hadlayaan xaaladooda midaas oo ay usoo dhiibeen Diblamaasiyiin kasocda Safaarada Sweden.
Wariyaasha ayaa ku tilmaamay mudada sanadka ah ee Xabsiga ay ku jireen Sanadkii ugu dheeri badnaa noloshooda ay soo mareen. Waalidka labada wariye mid kamid ah ayaa saxaafada u sheegtay inaysan ku fakareyn xabsigooda innuu saas u dheeran doono iyo waqtiga xabsiga lagasii deyn doono toona.
Labada Wariye ayaa waxa laga soo qabtay Dhulka Ogadeniya taariikhdu markay aheyd 1 July 2011 waxaana sanad kaamil ah u buuxsamaya Maalinimada Axada ee fooda innagu soo heysa oo ah 1 July 2012.
Mudadaas ay xabsiga ku jireen waxa kadibmarki sida sharcidarada ah loo xukumay saxaafada caalamka aad uga hadashay wariyasha danbiga aysan laheyn lasaaray. Zenawi oo beenale ah ayaa sheegay in haddii ay cafis dalbadaan lasii deyn doono balse taas kaligi taliye Zenawi waa oofin wayay kadib markii labada wariye ay qirteen in dhulka Ogadeniya ay kuso galeen Visa la’aan balse wax argagaxiso laxidhiidha aysan ka fulin dhulka Ogadeniya. Sanadkan horaantiisi ayaa labada wariye waxay cafis weydiisteen in loo fidiyo..midaas oo illaa hada laga hoos qaadin.
Waxana gumeysiga Ethiopia kaligi taliye Zenawi uu raba in qofkasta oo isku daya innuu shacabka Ogadeniya xaladisa ka waramo uu ciqaab dheer mariyo isaga oo ka hortagaya in la oggaado halganka shacabka Ogadeniya iyo xasuuqa uu ka geysto dhulka Ogadeniya.
Shacabka ree Sweden ayaa arrintaas aad uga horyimid oo calanka Ogadeniya iyaga oo babinaya u sheegay Zenawi innuusan ku guleysaneyn cabudhinta uu suxufiyinta ree sweden u geystay iyo xasuqa uu ku hayo Shacabka Ogadeniya. Sida sawirka kore ka muuqda waa shacab kamid ah ree Sweden oo marki u horeysay calanka Ogadeniya bartay taagrona u muujiyay shacabka dhiban ee somalida Ogadneiya.